ဖက္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မျဖစ္မေန ေရွာင္ရမယ့္အခ်က္ (၆) ခ်က္ - For her Myanmar
Fashion, Fashion & Beauty, Tips
ဒီအခ်က္ေတြ သိထားမွ အထာက်က်လန္းႏိုင္မယ္
ေယာင္းတို႔ေရ…ဖက္ရွင္ဆိုတာ အရမ္းကိုမွ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ေတာ္ၾကာေနရင္း အသစ္ေတြေပၚလာလိုက္ ေတာ္ၾကာေနရင္း ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသြားလိုက္နဲ႔ လိုက္မမီႏိုင္ေအာင္ ဂြက်ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖက္ရွင္ခ်စ္သူေတြကေတာ့ ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္း ဘယ္လိုပဲအေျပာင္းအလဲျမန္ပါေစ တေကာက္ေကာက္လိုက္ရတာပါပဲေလ။ ဒီလိုေရစီးေၾကာင္းအတိုင္းစီးေမ်ာရာမွာလည္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြ ရွိေသးတာမို႔ ေယာင္းတို႔ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ေရွာင္ရန္အခ်က္ေတြကို Stella က ေျပာျပေပးမယ္ေနာ္။
(၁) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဝတယ္ဆိုၿပီး ဝတာကို မေပၚလြင္ေစခ်င္လို႔ အက်ႌပြပြႀကီးေတြ ဝတ္တာမ်ိဳးေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အက်ႌပြပြႀကီးေတြက ေယာင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကို မေပၚလြင္ေစမယ့္အျပင္ ပိုဝသလိုအသြင္ပါ ေပါက္ေစပါတယ္။
(၃) အရမ္းပါးတဲ့အက်ႌေတြ၊ ေပါင္လယ္ေလာက္ပဲရွိတဲ့စကတ္ေတြ၊ ခ်က္ေပၚအက်ႌေတြနဲ႔ ျမင့္လြန္းတဲ့ေဒါက္ဖိနပ္ေတြကို အမ်ားႀကီး ျပံဳၿပီး မဝယ္ပါနဲ႔။
(၅) နားတစ္ဖက္တည္းမွာ နားေပါက္ႏွစ္ေပါက္ထက္ ပိုမေဖာက္ပါနဲ႔။ နားေပါက္ေတြမ်ားေနတာက ေယာင္းကိုစမတ္မက်သြားေစပါဘူး။
ကဲ…ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ေယာင္းတို႔လည္း ဖက္ရွင္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေရွာင္ရမယ့္အခ်က္ေလးေတြကို သိၾကၿပီေပါ့ေနာ္။ ဖက္ရွင္ခ်စ္သူေယာင္းတို႔လည္း ေရွာင္သင့္တာေရွာင္ၿပီး ဒီထက္ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၾကပါေစလို႔….
ဒီအချက်တွေ သိထားမှ အထာကျကျလန်းနိုင်မယ်
ယောင်းတို့ရေ…ဖက်ရှင်ဆိုတာ အရမ်းကိုမှ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ တော်ကြာနေရင်း အသစ်တွေပေါ်လာလိုက် တော်ကြာနေရင်း ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသွားလိုက်နဲ့ လိုက်မမီနိုင်အောင် ဂွကျပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေကတော့ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်း ဘယ်လိုပဲအပြောင်းအလဲမြန်ပါစေ တကောက်ကောက်လိုက်ရတာပါပဲလေ။ ဒီလိုရေစီးကြောင်းအတိုင်းစီးမျောရာမှာလည်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေ ရှိသေးတာမို့ ယောင်းတို့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ရှောင်ရန်အချက်တွေကို Stella က ပြောပြပေးမယ်နော်။
(၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝတယ်ဆိုပြီး ဝတာကို မပေါ်လွင်စေချင်လို့ အင်္ကျီပွပွကြီးတွေ ဝတ်တာမျိုးရှောင်ကြဉ်ပါ။ အင်္ကျီပွပွကြီးတွေက ယောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မပေါ်လွင်စေမယ့်အပြင် ပိုဝသလိုအသွင်ပါ ပေါက်စေပါတယ်။
(၂) ဈေးချနေပြီဆိုတိုင်း အင်္ကျီတွေကို ပြေးမဝယ်ပါနဲ့။ ယောင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
(၃) အရမ်းပါးတဲ့အင်္ကျီတွေ၊ ပေါင်လယ်လောက်ပဲရှိတဲ့စကတ်တွေ၊ ချက်ပေါ်အင်္ကျီတွေနဲ့ မြင့်လွန်းတဲ့ဒေါက်ဖိနပ်တွေကို အများကြီး ပြုံပြီး မဝယ်ပါနဲ့။
Related article >>> ဒေါက်ဖိနပ်လှလှလေးတွေကို ဆိုဒ်မှန်မှန်ရွေးကြမယ်
(၄) အိတ်တွေလွယ်တဲ့အခါ ပစ္စည်းတွေအများကြီး ပြည့်ကျပ်နေအောင် မထည့်ပါနဲ့။ အိတ်ကြီးဖောင်းကားနေတာ ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မလှပါဘူး။
(၅) နားတစ်ဖက်တည်းမှာ နားပေါက်နှစ်ပေါက်ထက် ပိုမဖောက်ပါနဲ့။ နားပေါက်တွေများနေတာက ယောင်းကိုစမတ်မကျသွားစေပါဘူး။
(၆) အရောင်တွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်း တွဲမဝတ်ပါနဲ့။ အဝတ်အစားဝတ်တဲ့အခါမှာ အရောင်သုံးရောင်ထက် များသွားရင် ကြောင်ကြောင်ကျားကျားနဲ့ ကြည့်လို့မလှတော့ပါဘူးနော်။
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့လည်း ဖက်ရှင်နဲ့ပက်သက်ပြီး ရှောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကို သိကြပြီပေါ့နော်။ ဖက်ရှင်ချစ်သူယောင်းတို့လည်း ရှောင်သင့်တာရှောင်ပြီး ဒီထက်ပိုပြီး ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့….
Tags: Fashion, fashion geek, fashionista, Style, styling hacks, tips, what to wear